30 taona ny tetikasa GNU | Avy amin'ny Linux
30 taona ny tetikasa GNU
Izy ireo dia Rohy | | GNU / Linux, About us, hafa
Amin'ny andro toy ny androany, 30 taona lasa izay Richard Stallman atombohy ny tetikasa GNU, ary noho izany, nanomboka ny fihetsiky ny Free Software ary mamorona ny Fahalalahana 4.
Natao ity hetsika ity mba hamoronana rafitra fandidiana maimaim-poana mifanaraka amin'ny UNIX (raha ny marina GNU dia midika GNU dia tsy Unix) mamorona fitaovana isan-karazany toy ny compiler GCC, mpamoaka lahatsoratra EMACS (noforonin'i Stallman tenany nandritra ny taona niasany tao amin'ny MIT), sns, saingy very ampahany lehibe, ny voam, izay ho tonga amin'ny 1991 amin'ny anarana hoe Linux, natombok'i Linus Torvalds (Efa fantatrao ny antony tokony iantsoana ilay OS GNU / Linux ary tsy ny Linux ihany, na dia afaka miantso an'izay tiany aza ny tsirairay).
Nandritra izay taona izay dia niady ho an'ny fahalalahan'ny lozisialy i Richard Stallaman, nanangana ny Free Software Foundation, ny fahazoan-dàlana GPL, manohana ny fahazoan-dàlana Creative Commons, Etc.
Ary iza no tsara noho Stallman tenany hanazava ny atao hoe Free Software:
30 taona, ary avelao hisy 30 hafa hafa ^^
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » 30 taona ny tetikasa GNU
Izy ireo dia Link dixit:
"Efa fantatrao ny antony tokony hiantsoana ny OS hoe GNU / Linux fa tsy Linux fotsiny, na dia azon'ny rehetra atao aza ny miantso azy amin'izay tiany"
"Hydorah: Lalao Indie vaovao ho an'ny Linux"
Ho ela velona i Stallman sy GNU. 🙂
Ho ela velona i San Ignucio!
Matotra, faly telopolo taona ny tetikasa GNU. Raha tsy izy dia tsy hanana kernel Linux afaka omen'ny olon-drehetra izahay, ary tokony hipetraka ho an'ny kernel Hurd izahay.
Na izany na tsy izany, arahabaina.
Heveriko fa ny mifanohitra amin'izay no izy.
-spyker- dia hoy izy:
Mety hanana izany i Kernel, ary angamba manana fahazoan-dàlana izay tsy ho Talibanista amin'ny ankapobeny ny vondrom-piarahamonina (tsy izy rehetra).
Ary ... mifanohitra amin'izay no nolazainao ... tsara.
Valio amin'i -spyker-
Fanitsiana: Tsy hanana Hurd na Linux izahay. Ary tokony hipetraka amin'ny FreeBSD izahay
OpenBSD tonga taty aoriana
Arahaba Stallman, mpaminanintsika sy mpamonjy
Tsy natao ho an'ny inona izany, fa hianiana aho fa ity no karazana VALVE, na koa hoe niova be i Stallman.
Aleoko apetaka ity sary ity:
Tsy natao ho an'ny inona izany, fa afaka nianiana aho fa tsy azonao ny vazivazy nataoko. Ilay bandy VALVE dia mitovy endrika amin'i Stallman.
Io dia ny vatana vaovao ao amin'ny vatana vaovao ao San Ignucio.
Tsy midika hoe gnu / linux izany, mety ho tamin'ny fotoana tsy nahitana programa firy sy raha toa ka mila manantona ireo novolavolain'i gnu ianao. Amin'izao fotoana izao, ny hany zavatra ampiasaina amin'ny zavatra novolavolain'i gnu dia bash, ary gnome gimp (na dia efa namolavola ny gnome fondation aza ny gnome ka tsy mifanaraka intsony izao afa-tsy ny anarana) sy ny gcc / gdb / glibc hanangonana ny fonosana sy fahazoan-dàlana.
Amin'ny ho avy, ny hany sisa tavela amin'ny gnu dia ireo fahazoan-dàlana, (raha tsy mivoaka ny fahazoan-dàlana tsara kokoa dia azo antoka fa hivoaka 🙂) Satria ny bash dia soloina iray tsara kokoa, ary ny gcc / gdb / glibc koa.
Diso io adihevitra io, ampy ny mahafantatra kely momba ny injenieran'ny rindrambaiko sy ny fomba fiasan'ny kinova amin'ireo tetikasa.
Avy amin'ny windows 95 (ary tsy hiverina aho mba tsy tadidiko ireo monocrome monitors) hatrany amin'ny windows 8 dia azo antoka fa tsy misy soritr'ireto kaody ireto ihany, ny kaody vaovao dia mety tsy olona mitovy no nanoratra, ary izany no tsy hoe maninona izy no mijanona tsy ho windows.
Aleo tsy diso fampahalalana diso.
Rindrambaiko ara-barotra io, tsy azo ampitahaina ny fampitahanao. Tsy hijanona tsy ho varavarankely izy io, na dia hampiasa fitaovana gnu rehetra aza izy ireo ary tsy misy microsoft.
"Rindrambaiko ara-barotra io"
ARY? Ny rafitry ny GNU / Linux dia mety ho varotra ihany koa, ankoatr'izay, inona no ifandraisan'ny tanjon'ilay rindrambaiko amin'izany raha miresaka momba ny injenieran'ny rindrambaiko sy ny dikanteniny isika? Andao tsy afangaro ny paiso amin'ny paoma.
"Ny fampitahanao dia tsy azo ampitahaina."
Tsara raha manohana ireo fitakiana ireo.
"Tsy hijanona ho varavarankely io, na dia hampiasa fitaovana gnu rehetra aza izy ireo ary tsy misy microsoft."
Na dia diso aza izany ohatra izany dia manampy ahy raha mametraka azy ianao, satria io lazaiko io ihany, tsy maninona na tsy kaody am-boalohany aza ny kaody, tsy mijanona ho tetikasa mitovy.
Ny pitsopitsony dia tsy hita fa mitovy amin'ny GNU izy tahaka ny an'ny Windows, tsy resaka fahazoan-dàlana izany, milaza fa lainga izany, ary manao izany amin'ny tontolo tsy misy dikany.
Raha nametraka fahazoan-dàlana aho dia tokony nampiasa "tanjon'ny rindrambaiko."
Satria ny GNU dia tsy anarana nomen'ny orinasa iray, dia anarana nomena izany satria tamin'izany fotoana izany ny rafitra dia miankina amin'io, vanim-potoana.
Amin'ny fotoana ijanonanao miankina aminy dia lasa tsy misy dikany mihitsy ny anarany hoe, afa-tsy ilay nostalgia. Raha ny fanazavana, iray amin'ireo distros voalohany, dia tsy nantsoina hoe gnu / linux, fa gnu / x11 / linux.
Etsy ankilany, ny varavarankely dia anarana mahazatra napetraky ny microsoft hamaritana ny vokatra ananany, ary tsy misy ifandraisany amin'ny fitaovana na kernel ampiasainy, ka tsy misy antony tokony hiovana ny anarany.
Tahaka ny Coca-Cola ankehitriny, tsy manana na inona na inona avy amin'ny Coca na Cola intsony izy, fa mifangaro akora simika amin'ny siramamy, rano ary kafeinina izay vokatr'izany vokatra izany: COCA-COLA.
Etsy ankilany, hisy ny hafa izay afaka manohy antsoina hoe REFRESCO DE COLA, satria izy ireo dia mbola mampiasa an'io voanjo io amin'ny famokarana zava-pisotro.
"Satria ny anarana GNU tsy omen'ny orinasa iray,"
Inona no ifandraisany amin'ny tsy orinasa? Angamba anarana nomena ny rafitra fandidiana.
"Anarana nomena io satria tamin'io fotoana io ny rafitra dia niankina tamin'io, vanim-potoana."
Diso, tsy nomena ilay anarana satria miankina aminy izany, raha ny marina dia efa nisy talohan'ny rafitra fandidiana ilay anarana.
"Ny Tetikasa GNU dia nanomboka tamin'ny 1984 mba hampivelatra ny rafitra GNU" avy amin'ny GNU.org
Amin'ny fotoana ijanonanao miankina aminy dia lasa tsy misy dikany mihitsy ny anarany hoe, afa-tsy ilay nostalgia.
Diso, efa nohazavaiko ny fomba rehefa miova kinova ny rindrambaiko dia mijanona ho iray, na dia eo aza ny zava-misy fa ireo singa tany am-boalohany dia efa lany andro tamin'ny vaovao.
"Izay rahateo, iray amin'ireo distro voalohany, tsy nantsoina hoe gnu / linux, fa gnu / x11 / linux."
Diso indray, ny GNU FAQ dia manazava tsara an'io.
"Fa kosa ny varavarankely dia anarana mahazatra iray izay nampiasain'ny microsoft hamaritana ny vokatra entiny."
Diso, Windows dia tsy anarana iraisana, azafady, ny karazany tsirairay dia miankina amin'ny zon'ny mpamorona ary voafaritra tsara amin'izay azony atao sy tsy azo ampiasaina.
"Ary tsy misy ifandraisany amin'ny fitaovana na kernel ampiasainy, ka tsy misy antony tokony hanovana ny anarany."
Toy izany koa no mitranga amin'ny rafitra GNU, ny anarany dia tsy misy ifandraisany amin'ny fitaovana ampiasainy, antsoina hoe GNU izy io satria ny tetik'asa GNU no namorona azy (talohan'ny nisian'ny fitaovana izay mamorona azy ankehitriny), mitovy amin'ny Nomena anarana toy izany ny Linux satria toa ny anaran'izay nanao azy io.
Ampahatsiahivinao ahy ilay mpaneho hevitra FayerWayer antsoina hoe @Win.
Ny teny hoe "windows" dia anarana varotra fotsiny fa tsy zavatra tena marimarina kokoa sy ara-teknika toa ny GNU / Linux. Windows amin'izao fotoana izao ao anatiny dia NT ho an'ny birao sy RT ho an'ny finday fa talohan'ny taona CE, Win32, DOS sns. Miankina amin'ny fepetra inona no arahintsika mba hanomezana anarana azy ireo: Ny ara-barotra sa ny ara-teknika? Amin'ny farany dia hiafara toa an'i Linus isika, "antsoiko azy toy ny bandy satroka fotsiny izy." Manana ny fisalasalako aho raha toa ka fifanoherana (maimaim-poana - tsy maimaim-poana) ny fiantsoana distro miaraka amin'ny DRM GNU.
Heveriko fa eto isika dia efa mihataka amin'ilay lohahevitra.
Ary misy aza ny grapefruits izay tsy nisy afa-tsy ny voanjo sy paoma nafangaro.
Hanazava ny lesoka ao amin'ny hevitrao aho, fa miangavy anao hiverina amin'ilay lohahevitra.
Windows no anaran'ilay tetikasa, ny anarana ara-barotra dia ohatra, Windows Millenium, Windows Vista, Windows XP.
(Amin'ny tontolon'ny GNU / Linux dia izao: Ubuntu, RedHat *, sns.)
NT dia midika kinova. Win XP dia kinova NT 5.1, Vista no NT 6, Win 7 dia NT 6.1 ...
Windows Mobile sy Windows Phone ary ny dikan-tarehin'izy ireo dia tetik'asa samihafa, tsy hitako izay antony itenenanay azy ireo eto.
ROA, eto raha mikasika zavatra manampy ahy hanohana bebe kokoa ny tohan-kevitro ianao.
DOS dia rafitra miasa alohan'ny Windows, rehefa teraka ny tetik'asa Windows dia nifototra tamin'ny DOS izany, avy eo nanjary fitaovana, noho izany, naka rindrambaiko alohan'ny sy taorian'ny nahaterahany, Windows dia niova endrika isaky ny kinova, tsy nijanona ho ny tetikasa Windows .
* Red Hat (ny anaran'ny varotra) dia rafitra GNU / Linux KOMERIKALY (na dia orinasam-barotra ampahibemaso!) Tsy hitako hoe maninona no tena ilaina ny DRM raha hatao ara-barotra.
Tsy te-ho offtopic aho fa paiso sy paoma? NT, Win9x / Win32 / DOS, CE dia maritrano sy karazana kernel Windows (mari-pamantarana tokana). 98, XP, 7, 8, Me dia fiovana ara-barotra ihany ho an'ny besinimaro. Tamin'ny andro taloha, ny programa ho an'ireo 3 rehetra dia navahana, iray amin'ireo antony maro nipoitra .NET. Ohatra, ny programa tranainy toa an'i Norton Ghost dia tsy afaka nihazakazaka tamin'ny NT4.0, 2k, XP, fa 9x (ny maritrano NT dia tsy manana command.com mifehy ny fitaovana, fa tandindon'ny rafitra mampiasa HAL). Ny DOS dia nampiasaina ho toy ny rafitra fototra ho an'ny 3.11 ary velona miafina izany mandra-pahatongako.
Ny RedHat dia misy ny fahazoan-dàlana (fa tsy ny fahaiza-manohana) amin'ny alàlan'ny adiresy mac tsy DRM, mamoaka ny kaody loharano sy ny fanovana azy. Mifanaraka tanteraka amin'ny hevitry ny GNU. Miaraka amin'ireo rafitra DRM no tiako hambara dia Android (mazava fa tsy GNU), ary indrindra ny SteamOS (Valve manohana an-karihary ny DRM) ... Tsy azoko antoka fa manana ny fahalalahan'ny birao GNU / Linux nentim-paharazana izy ireo. Mazava ho azy fa SteamOS dia tsy maintsy mampiasa fitaovana GNU sasany, saingy ho limbo izany.
Raha izany, raha lohahevitra matotra io dia manantena aho fa tsy hampiantso ny saintsika izy ireo.
«NT, Win9x / Win32 / DOS, CE dia maritrano sy karazana kernel Windows (mari-pamantarana tokana). »
NT sy win9x dia fianakavian'ny vokatra, API win32 ary win16 no API, OS ny DOS avy eo fitaovana OS, CE (Windows CE) dia OS iray hafa izay tsy resahantsika.
Azonao atao ny mitady wikipedia ho an'ny teny tsirairay hanamafisana.
Ity dia mari-pamantarana marika ihany dia mila fampisehoana.
Hitako ato amin'ny wikipedia ity:
"Microsoft Windows dia andiam-pandehan-draharaha miasa miaraka amin'ny sary, novolavolaina, amidy ary amidin'i Microsoft."
«98, XP, 7, 8, Me dia fiovana ara-barotra ihany ho an'ny besinimaro. »
Heveriko fa nahita ny olana aho teto, mampiasa ny teny hoe "kinova" amin'ny toe-javatra hafa ianao. (ary noho izany, mifangaro poara sy paoma).
Ny kinova lozisialy momba ny lozisialy (izay faritra idiran'ity adihevitra ity) no tarehimarika na tarehimarika ampiasainay hanarahana ny fizotran'ny tetik'asa.
Ohatra Gimp VERSION 2.8.
Noho izany, ny tetikasa windows dia manana ao amin'ny fianakaviany NT, kinova 6.2.9200 ireo vokatra zarainy amin'ny anaran'ny varotra Windows 8 sy Windows Server 2012.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa, mikaroha "fanovana lozisialy" hanavahana ny fianakaviana, ny kinova ary ny anarana ara-barotra.
Ny sisa amin'ny tantara momba ny windows, Norton, Android (miala amin'ny lohahevitra) ary koa ny vaovao avy any Valve, izay tsy misy ifandraisany amin'izany, aleoko tsy manome hevitra momba azy ireo.
Nametraka slash (/) aho fa tsy koma (,) mba ho marimarina (maritrano / api / kernel) 9x dia tsy mitovy fa miankina amin'ny baiko sy api, mitovy amin'ny kernel linux misy gnu (tianao izany. Andao hatao hoe izany, sa tsy izany?) Ce koa dia maritrano iray hafa izay niorenan'ny finday ary taty aoriana. Steam dia mampiasa drm sy gnu, redhat dia mampiasa gnu, fa tsy drm ary tsy hitako izay maharatsy azy (na dia tsy nitondra izany aza aho hiadian-kevitra) maninona no tsy misy ifandraisany amin'ny gnu?
Araka ny nolazaiko tamin'ny hevitra voalohany nataoko, ny drm sy ny gnu dia fifanoheran-kevitra (a izay mifehy izay tokony hatao ary nomen'izy ireo azy hoe gnu?) Tsy mbola namaly izay mifanohitra amin'izany ianao hatreto. Araka ny ho hitanao amin'ity tranga ity dia mety tsy mahazo aina ny mametraka gnu. Oh ary ilay nanonona ny fikandrana manandrana mahita fitoviana amin'ny gnu + linux (paiso miaraka amin'ny paoma) dia tsy izaho fa ny mifanohitra amin'izay no nataoko. Salama.
ps: mety ho nomeko anarana kde raha toa ka tena tetikasa naverina imbetsaka soratana imbetsaka fa tsy mari-pamantarana rindrambaiko multi-platform tsy misy ifandraisany.
Fa ny gnulinux dia TSY ny anarana napetraka ho anarana iraisan'ny rafitra miasa rehetra izay mampiasa ny kernel linux (ny stallman irery ihany no mampiasa azy). Na izany aza, Windows SI dia anarana ara-barotra ampiasaina hanondroana ny fianakavian'ireo rafitra miasa noforonin'i Microsoft, manana Windows XP, Windows Vista, Windows 7, sns izahay. Mariho fa ny ampahany farany amin'ny anaran'ny rafitra miasa dia miova koa mba hanondroana fa tsy mitovy daholo izy ireo. Tsy fantatro izay misy distro linux antsoina hoe gnulinux, ity dia Ubuntu, archlinux, fedora, debian, sns. Saingy io antokom-pinoana jeneraly ampiasain'ny sasany io dia tsy apetraka na aiza na aiza, fanao fotsiny io. Ary fomba fanao taloha ... araka ny nolazaiko fa manamafy ny hevitro aho
"Saingy ny gnulinux dia TSY ny anarana napetraka ho anarana iraisana ho an'ny rafitra miasa rehetra izay mampiasa ny kernel linux"
Raha manisa android ianao, sy rafitra hafa mampiasa ny Linux Kernel, marina ny anao, fa tsy tokony hifandray ilay hevitra.
Raha toa ka manondro ireo distros ianao dia mianjera ao anaty hadisoana hafa, ireo disro dia tsy rafitra fiasa hafa, novaina DISTRIBUTIONS OF THE SISTEMA IHANY.
Ka, GNU / Linux raha io no anarana napetraka, tsy ho an'ny NAME fa ny FAMARITANA ireo rafitra rehetra mampiasa ny rafitra fiasan'ny GNU miaraka amin'ny Linux kernel.
"(Ny stallman ihany no mampiasa azy)."
Diso, heveriko fa tsy tokony hanilika an'io aho, sa tsy izany?
Momba ny ambiny napetrakao, heveriko fa satria tsy namaky ny hevitro teo aloha ianao (fahasamihafana 1 minitra fotsiny eo anelanelako sy ny anao).
Fa hazavaiko ihany na izany aza, amin'ny fampiasana ny "anaran'ny varotra" mitovy amin'ny nampiasanao.
Misy tetikasa politika GNU, voafaritra ary voatendry alohan'ny birao mifanandrify aminy (mety amin'ny copyleft)
Misy tetikasa GNU SOFTWARE izay miteraka OS GNU (mitovy amin'ny etsy ambony)
Misy tetikasa rindrambaiko antsoina hoe Linux izay ny vokany dia Kernel (mitovy amin'ireo voalaza etsy ambony nefa ity misy miaraka amin'ny zon'ny mpamorona, koa azo antoka fa raha tsy nahasoa azy ireo ny fikorontanana dia efa nitaraina momba ny tsy fahazoan-kevitra izy ireo)
Izy rehetra miaraka amin'ny pejiny ao amin'ny wikipedia izay manamarina azy.
Misy ny tetikasa Debian, izay KOMUNIDA, izay mitazona ny rafitra fiasan'ny GNU ary ny valiny dia:
EYE, ireo no anarana ofisialy, FA TSY ny VAROTRA.
Toy izany koa ny Arch amin'ny endriny miaraka amin'ny Linux sy HURD.
Misy ny tohan-kevitro ary ambonin'ireo SOURCES rehetra dia tena liana te hahafantatra ny anao aho.
Ny famaritana ny rafitra miasa dia tsy zavatra napetraka ary marina 100%, satria ohatra:
1- Ireo izay milaza fa ny rafitra miasa dia ny kernel, ary ny fitaovana ilaina amin'ny fototra
2- Ireo izay milaza fa ny rafitra fiasa no fotony, ny fitaovana ilaina, ny mpizara sary ary ny tontolon'ny birao (ity teôlôjia tohanan'ny Microsoft ity mihitsy)
Noho izany, ho an'ny ubuntu, archlinux sns, mifototra amin'ireo roa ireo, dia rafitra miasa izay mampiasa ny kernel linux, ireo fitaovana sasany gnu, ary ireo fivoaran'ny antoko fahatelo izay mahatonga azy ireo ho lozisialy azo ampiasaina ho an'ny zanak'olombelona.
Ny Debian Project dia fikambanan'ny olona nanao antony iraisana hamoronana rafitra miasa (OS) maimaimpoana. Ity rafitra fiasa noforoninay ity dia antsoina hoe Debian.
vonona. tsy misy holazaina intsony
momba ny debian. haha. Tsy misy dikany ny hevitrao. Ny marina dia ny valiny voalohany nataonao tamina fangoraham-po. haha tsy haiko ny nanekenao ny rindrambaiko, ankoatry ny fampahalalana diso haha. Andriamanitra ô. Izay no antony tsy iarahako miaraka amin'ireo mpahay siansa amin'ny solosaina, ny ankamaroan'izy ireo dia tsy azo oharina
Mila manohy mamaky ianao.
«Ny ampahany lehibe amin'ny fitaovana fototra izay mameno ny rafitra fiasa dia avy amin'ny tetikasa GNU; noho izany ny anarana: GNU / Linux, GNU / kFreeBSD ary GNU / Hurd. Maimaimpoana koa ireo fitaovana ireo. "
Izany dia milaza izany amin'ny pejy mitovy amin'ny http://www.debian.org/intro/about Mihevitra aho fa avy aiza no nahazoanao ny mombamomba anao, ary tsy mifanohitra amin'izay nolazaiko izany.
Vatosoa re izany!
Mangalatra anao aminao aho ary mamaly izany amin'ny fanamarihana soratako.
Emm… ohatra…. TCP / IP ???
Mamaly an'i wilson
Miarahaba, ary enga anie ity tetik'asa tsara momba ny etika mpahay siansa hanatanteraka zavatra maro ity.
Manantena aho fa hanohy hiaina sy hanatsara ny GNU mandritra ny taona maro ianao, arahabaina ihany koa ho an'izay rehetra mampiasa sy mandray anjara amin'ity tetikasa ity.
Miarahaba anao nandritra ny 30 taona
Bristol dia hoy izy:
arahabaina afaka 30 taona….
Mamaly an'i Bristol
Misaotra an'i mr. Stallman noho ny fanombohana ny hetsika ho antsika rehetra hahatratra rafitra malalaka sy etika-stallmanika izay ahafahako mianatra mandamina programa tsy misy fameperana ary tsy mila manaiky teny izay hamela antsika fotsiny araka ny fanirian'ireo empira rindrambaiko vitsivitsy ( indray andro dia apetrako eo amin'ny ipod i debian hurd (mbola tsy nahalala ny fahalalahana efatra aho rehefa nahazo izany). GNU ho an'ny rehetra hyey!
Mba hizaha olona dia mihataka ianao ary ampy ny lohahevitra.
Raha te hiresaka momba ny windows ianao, amin'ny forum na aiza na aiza, eto aho miresaka momba ny 30 taona an'ny GNU, noho izany, azafady, mifantoha amin'ilay lohahevitra.
vivaldis dia hoy izy:
Miarahaba ny mpiara-monina. Fizarana mandritra ny 30 taona. Ary na dia hatramin'ny andro voalohany aza dia nahazo fanafihana izy, ny sasany amin'ny anaran'ny fahalalahana sy ny fanodinkodinana am-bava hafa.
Miarahaba an'i Richard Stallman noho ny fihazonany antsika hifoha fa tsy ho resin'ny feon-kira sirenen, tsy resin'ny fametraham-pialana izay ezahin'ny neolibaly hitarika antsika amin'ny politikam-pandraharahana, izany hoe ny politikany fandrobana sy fanokanana ireo entana iraisana.
Mamaly an'i vivaldis
ary teraka daholo ny zava-drehetra noho ny mpanonta.
Tsy mbola nisy i HP LIP XD
Tsy fantatro hoe iza, hoy ilay marika, richard stallman, tamin'ny Espaniôlany ratsy indrindra, fa rehefa nangataka ny kaody mpamily mpanonta izy ireo dia nolavin'izy ireo. Teo aloha dia tsy nolavin'izy ireo mihitsy ny safidy hijerena ilay kaody, manodidina ny 68.
Tohina noho ny fandavana ny famerenana ny kaody, dia nanomboka ny hetsika GNU iray manontolo izy. Richard Stallman dia olona maotina tanteraka.
Te hahafantatra izay OS ampiasainao aho?
1) Xerox io
2) GNewSense no ampiasainy.
Ny RMS dia mampiasa ny interface TTY matetika, ary indraindray ny interface X11 hampiasa GIMP ao amin'ny GNewSense.
Ankoatr'izay dia tsy mifandray afa-tsy amin'ny Internet izy ireo ary mandefa sy mandray mailaka …………… avy amin'ny emacs
Ankoatry ny zava-misy fa tsy misy singa GNU ilaina intsony amin'ny fizarana GNU / Linux amin'izao fotoana izao, i Stallman sy ny vondrona nanohana azy dia nanana ny vina sy ny fanapaha-kevitra hanangana ny fototry ny Free Software (izay mivelatra amin'ny faritra hafa toy ny famoronana lisansa. commons), izay mendrika ny fankasitrahana malalaka ny endriny; raha tsy misy ny faharesen-dahatra azon'izy ireo dia samy hafa tanteraka ny tantaran'ny informatika.
Arahabaina ao anatin'ity 30 taona niasan'ny tetikasa GNU ity sy ny fiderako an'ireo rehetra nanatanteraka izany.
Toy izany koa. Raha tsy misy RMS, ny foto-kevitry ny rindrambaiko maimaim-poana dia tsy hisy toy izany.
rizhu dia hoy izy:
Ny Zapatista dia nalamina tamin'ny taona 1984 sy ny tetikasan'ny gnu tamin'izany fotoana izany. Firy taona aho. 30 taona tolona sy fanoherana. Miarahaba ity tetikasa ity izay tsy isalasalana fa nandray anjara tamin'ny fanantenan'ny tontolo tsaratsara kokoa, tontolo iray sahaza tontolo maro. Miarahaba anao.
Mamaly an'i rizhu
Miarahaba anao GNU ary misaotra betsaka.
Valiny amin'ireo Malagueños tany am-boalohany sy Malalaka
Mametraha interface virtoaly ao amin'ny ArchLinux